ခုချိန်ထိ ချိန်ပါဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းများ – Gentleman Magazine
သင့်ကိုဘာကြောင့် ဆော်တွေ မကြိုက်တာလဲ စဉ်းစားရခက်နေလား။ သင့်စီမှာ ဆော်တွေကြွေနိုင်တဲ့ အလုပ်၊ ဝင်ငွေ၊ ခန္ဒာကိုယ် တွေပိုင်ဆိုင်နေပါလျှက်နဲ့ ကြောင်သမျှဆော် မှန်သမျှ ရှောင်ရှောင်သွားတာကြုံနေရပါသလား။ ဘာကြောင့်ရှောင်ရှောင်သွားတာလဲသိချင်ရင် ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ သိချင်ရင် အဆုံးထိဖတ်လို်က်ပါ။
ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေတဲ့အခါ သူကြိုက်လာအောင် သင့်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေ၊ သင်မိဘ အကြောင်းတွေ၊ သင်ဘယ်လောက်အလုပ်ကြိုးစားတာတွေ ၊ ညီအကိုမောင်နှမအကြောင်းတွေ၊ သင်ဘယ်လောက်စိတ်ထားကောင်းတာတွေ အစရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေပဲ သူအထင်ကြီးအောင် ဖောက်သည်ချမိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ သူအထင်ကြီးအောင်လုပ်လုပ် သင့်အကြောင်းတွေချည်းပိတ်ပြောနေမယ့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် တစ်ဘို့တည်း ကြည့်တဲ့ သင့်ကို သူနောက်တစ်ခါတွေ့ချင်မှားမဟုတ်ပါ။
အမှန်ကသင့်အကြောင်းပြောမယ့် အစား သူ့အကြောင်းကို မေးပြီး သူပြောတာကိုနားထောင်ပါ။ သူမေးလာရင်တောင်မှ လိုရင်းတိုရှင်း လုပ်ပြီး သူ့ဘက်ပြန်လှည့်ပြီး သူစိတ်ဝင်စားတာတွေ၊ အားကစားတွေ၊ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ၊ သွားတက်တဲ့နေရာတွေ၊ ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ၊ မောင်နှမအကြောင်းတွေ၊ သူ့အိမ်မွေးတိရိတ္ဆန်တွေ မေးပါ။ ဒီလုိုနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေကို သင်ပိုသိလာပြီး သူ့ကိုပိုဂရုစုိုက်ကာ သူ့အသည်းကိုဆွတ်ခူးနိုင်မှာပါ။
အရင်ရည်းစားနဲ့ ဘာကြောင့်ပြတ်သွားတာလဲဆိုတာ ကို စကားမစပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် သူမေးလို့ဖြစ်ဖြစ် ပြောမိပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်လို့ ပြောမိပြီ ဆုိုကတည်းက သင်သူ့ကို သတိရနေသေးလို့ပဲလို့ ယူဆပါလိမ့်မယ်။ သူမေးလို့ ပြောတယ်ဆိုရင် ဝေဝေစာစာ ပြောမိလုို့ကတော့ မပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်သွားပါလိမ့််မယ်။ ဘယ်ကောင်မလေးကမှ သူ့ရည်းစား အရင်ဆော်အကြောင်းကို အသေးစိတ်မသိချင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်နေမှာပါ။
ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ အကြောင်း တစ်ခုခုရှိလို့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါ။ အမှန်က သူမေးရင်တောင် ဒီလို လိုရင်း တိုရှင်းဖြေပါ ”စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်“ ဆက်ပြီး အတင်းမေးလာရင် ”ပြီးခဲ့တာတွေ က ထားလိုက်ပါတော့။ အခုက သူတစ်ယောက်ထဲ အကြောင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်“ ပေါ့။
သူယုံကြည်တာ၊ ကိုးကွယ်တာ၊ ကြိုက်တာတွေ ဟာသလုပ်ခြင်း
လူဆိုတာကိုယ့်အကြိုက် ကိုယ် လုပ်နေကြတဲ့သူတွေပါ။ သူဟာသူ ကိုးရီးယား ရောဂါထနေတာ၊ ဘာသာခြားနေတာ၊ ငွေအသုံးကြမ်းတာ၊ စိုင်းစိုင်းကို ကြွေတာ၊ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်ကသွားလောင်မိရင်၊ ဟာသလုပ်မိရင် မဆက်သေးတဲ့ သံရောဇင်ကြိုးလေး ဖြတ်ခနဲ ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဟာကိုယ် ဘောပွဲကြည့်တာ သူလာ ပြသာနာရှာလို့မရသလို သူကြိုက်ချင်တာကြိုက်တာ ကို ကိုယ်ကသွားပြောလို့မရပါဘူး။ မကြိုက်တက်ရင်နဂိုထဲက မတွဲနဲ့ပေါ့။
အမှန်က ကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောလာရင် ဥပမာ ကိုးရီးယားကားတွေ အကြောင်းပြောလာရင် “ကိုးရီးယား ကားသိပ်စိတ်မ၀င်စားလို့ မကြည့်ဖြစ်ဘူး“ လုို့ပဲငြင်းလိုက်. သူဘာမှဆက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်အတွင်းရေး များကို ပြောခြင်း
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့် အဆင်မပြေတာနဲ့ ကိုယ် ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာအဆင်မပြေတာ၊ မိဘတွေ က အဆင်မပြေတာ၊ မောင်နှမတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ၊ စတာတွေကို သနားအောင်သွားပြောတက်ကြပါတယ်။ စတွဲတွဲချင်း ဘယ်ဆော်ကမှ ကိုယ့်ပြသာနာတွေ ကိုမသိချင်ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့တယ်ဆိုတာ ပျော်ဖို့ ရွှင်ဖို့ လေ။ အပူတွေကိုဖောက်သည်ချ ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။
အမှန်က သူနဲ့ ကြိုက်သွားပြီ အဖြေရပြီ ဆိုတော့မှ ဒါတွေကိုစပြောရမှာ။ အစိမ်းသက်သက်ကြီး တွဲခါနီး သွားပြောလို့ကတော့ ဂွမ်းသွားမှာပေါ့။
ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့ ၁ခေါက် ၂ခေါက် လောက်မှာ သူအထင်ကြီးအောင် လို့ သင့်အိမ်က ဘယ်လောက်ချမ်းသာတာ၊ သင်က ဘာအကောင်ကြီး၊ သင်အလုပ်က ဝင်ငွေသိပ်ကောင်းတာကို ပြောရင် သူချက်ချင်း ကြွေပြီး သူ့မှာ သင့်ထက်ကောင်းတဲ့ ယောက်ျား မရှိဟုထင်သွားပြီး သင့် နားကခွာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး . . . ဟိတ် ထ ထ ထ . အိပ်မက် မက်မနေနဲ့။ ဒီလို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်ပါလာတဲ့မိန်းမက ငွေမက်တဲ့မိန်းမပဲ ရမယ်။ တကယ်ကောင်း တဲ့ ခေတ်ပညာတက် မိန်းခလေးတွေက တော့ သင့်ကိုစိတ်ထဲက လှောင်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကိုချောတဲ့ လှတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆို အဲ့ဒီလုို ငကြွားမျိုးတွေ သင့်ထက်ချမ်းသာတဲ့ ငကြွားတွေ က အပျိုမဖြစ်ခင် ခတဲ လာကြောင်နေတာ လက် မပြောနဲ့ ခြေချိုးရည်တာတောင် မလောက်ဘူး။
အမှန်က သင့်ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အများအကျိုး ကိုဘယ်လုိုဆောင်ရွက်မှာတွေ မိဘကျေးဇူးဘယ်လို ဆပ်မှာတွေ ကိုပြောပါ။ ဘဝရဲ့ ပန်းတိုင်တွေ ဘယ်လို ဆွတ်ခူးမလဲဆိုတာ ဘယ်လို ကြိုးစားနေသလဲဆိုတာ ကိုပြောပါ။ ငွေနဲ့ပက်သက်တာမှန်သမျှကို လုံးဝရှောင်ပါ . ကြွားတယ် လေလုံးကြီးတယ် ထင်လောက်သောစကားများကိုလည်းရှောင်ပါ။ ကိုယ့်လေနဲ့ကိုယ် မလွင့်သွားပါစေနဲ့။
လူပြိုကွီး ဖွဈရတဲ့ ကွောငျးအရငျး ၅ ခု
သငျ့ကိုဘာကွောငျ့ ဆျောတှေ မကွိုကျတာလဲ စဉျးစားရခကျနလေား။ သငျ့စီမှာ ဆျောတှကွှေနေိုငျတဲ့ အလုပျ၊ ဝငျငှေ၊ ခန်ဒာကိုယျ တှပေိုငျဆိုငျနပေါလြှကျနဲ့ ကွောငျသမြှဆျော မှနျသမြှ ရှောငျရှောငျသှားတာကွုံနရေပါသလား။ ဘာကွောငျ့ရှောငျရှောငျသှားတာလဲသိခငျြရငျ ဘယျလိုရှောငျရမလဲ သိခငျြရငျ အဆုံးထိဖတျလျိုကျပါ။
ကိုယျကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးတှတေဲ့အခါ သူကွိုကျလာအောငျ သငျ့ရဲ့ ဘဝအကွောငျးတှေ၊ သငျမိဘ အကွောငျးတှေ၊ သငျဘယျလောကျအလုပျကွိုးစားတာတှေ ၊ ညီအကိုမောငျနှမအကွောငျးတှေ၊ သငျဘယျလောကျစိတျထားကောငျးတာတှေ အစရှိတဲ့ သငျ့ရဲ့ ကောငျးတဲ့ အခကျြအလကျတှပေဲ သူအထငျကွီးအောငျ ဖောကျသညျခမြိပါလိမျ့မယျ။ ဘယျလောကျပဲ သူအထငျကွီးအောငျလုပျလုပျ သငျ့အကွောငျးတှခေညျြးပိတျပွောနမေယျ့ တဈကိုယျကောငျးဆနျ တဈဘို့တညျး ကွညျ့တဲ့ သငျ့ကို သူနောကျတဈခါတှခေ့ငျြမှားမဟုတျပါ။
အမှနျကသငျ့အကွောငျးပွောမယျ့ အစား သူ့အကွောငျးကို မေးပွီး သူပွောတာကိုနားထောငျပါ။ သူမေးလာရငျတောငျမှ လိုရငျးတိုရှငျး လုပျပွီး သူ့ဘကျပွနျလှညျ့ပွီး သူစိတျဝငျစားတာတှေ၊ အားကစားတှေ၊ ဘဝရညျမှနျးခကျြတှေ၊ သှားတကျတဲ့နရောတှေ၊ ရောကျဖူးတဲ့နရောတှေ၊ မောငျနှမအကွောငျးတှေ၊ သူ့အိမျမှေးတိရိတ်ဆနျတှေ မေးပါ။ ဒီလုိုနဲ့ သူ့အကွောငျးတှကေို သငျပိုသိလာပွီး သူ့ကိုပိုဂရုစုိုကျကာ သူ့အသညျးကိုဆှတျခူးနိုငျမှာပါ။
အရငျရညျးစားနဲ့ ဘာကွောငျ့ပွတျသှားတာလဲဆိုတာ ကို စကားမစပျလို့ပဲဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ သူမေးလို့ဖွဈဖွဈ ပွောမိပါလိမျ့မယျ။ စကားမစပျလို့ ပွောမိပွီ ဆုိုကတညျးက သငျသူ့ကို သတိရနသေေးလို့ပဲလို့ ယူဆပါလိမျ့မယျ။ သူမေးလို့ ပွောတယျဆိုရငျ ဝဝေစောစာ ပွောမိလုို့ကတော့ မပွတျနိုငျသေးဘူးလို့ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဘယျကောငျမလေးကမှ သူ့ရညျးစား အရငျဆျောအကွောငျးကို အသေးစိတျမသိခငျြပါဘူး။ ဘယျလိုပဲ ပွောပွော မကောငျးတဲ့ဘကျကို ဦးတညျနမှောပါ။
ပွတျသှားတယျဆိုတာ အကွောငျး တဈခုခုရှိလို့ အဆငျမပွလေို့ပါ။ အတိတျကိုအတိတျမှာထားခဲ့ပါ။ အမှနျက သူမေးရငျတောငျ ဒီလို လိုရငျး တိုရှငျးဖွပေါ ”စိတျသဘောထားမတိုကျဆိုငျလို့ လမျးခှဲလိုကျတယျ“ ဆကျပွီး အတငျးမေးလာရငျ ”ပွီးခဲ့တာတှေ က ထားလိုကျပါတော့။ အခုက သူတဈယောကျထဲ အကွောငျးကိုပဲ စိတျဝငျစားတယျ“ ပေါ့။
သူယုံကွညျတာ၊ ကိုးကှယျတာ၊ ကွိုကျတာတှေ ဟာသလုပျခွငျး
လူဆိုတာကိုယျ့အကွိုကျ ကိုယျ လုပျနကွေတဲ့သူတှပေါ။ သူဟာသူ ကိုးရီးယား ရောဂါထနတော၊ ဘာသာခွားနတော၊ ငှအေသုံးကွမျးတာ၊ စိုငျးစိုငျးကို ကွှတော၊ ဖွဈခငျြတာဖွဈနပေါစေ ကိုယျကသှားလောငျမိရငျ၊ ဟာသလုပျမိရငျ မဆကျသေးတဲ့ သံရောဇငျကွိုးလေး ဖွတျခနဲ ပွတျသှားပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျဟာကိုယျ ဘောပှဲကွညျ့တာ သူလာ ပွသာနာရှာလို့မရသလို သူကွိုကျခငျြတာကွိုကျတာ ကို ကိုယျကသှားပွောလို့မရပါဘူး။ မကွိုကျတကျရငျနဂိုထဲက မတှဲနဲ့ပေါ့။
အမှနျက ကိုယျစိတျမဝငျစားတဲ့ အကွောငျးတှေ ပွောလာရငျ ဥပမာ ကိုးရီးယားကားတှေ အကွောငျးပွောလာရငျ “ကိုးရီးယား ကားသိပျစိတျမဝငျစားလို့ မကွညျ့ဖွဈဘူး“ လုို့ပဲငွငျးလိုကျ. သူဘာမှဆကျပွောမှာမဟုတျဘူး။
ကိုယျ့အတှငျးရေး မြားကို ပွောခွငျး
လူတိုငျးကတော့ ကိုယျ့ အဆငျမပွတောနဲ့ ကိုယျ ရှိပါတယျ။ အိမျမှာအဆငျမပွတော၊ မိဘတှေ က အဆငျမပွတော၊ မောငျနှမတှေ အနိုငျကငျြ့ခံရတာ၊ စတာတှကေို သနားအောငျသှားပွောတကျကွပါတယျ။ စတှဲတှဲခငျြး ဘယျဆျောကမှ ကိုယျ့ပွသာနာတှေ ကိုမသိခငျြပါဘူး။ ခြိနျးတှတေ့ယျဆိုတာ ပြျောဖို့ ရှငျဖို့ လေ။ အပူတှကေိုဖောကျသညျခြ ပွီး စိတျညဈစရာတှေ တှေးရမှာမဟုတျဘူး။
အမှနျက သူနဲ့ ကွိုကျသှားပွီ အဖွရေပွီ ဆိုတော့မှ ဒါတှကေိုစပွောရမှာ။ အစိမျးသကျသကျကွီး တှဲခါနီး သှားပွောလို့ကတော့ ဂှမျးသှားမှာပေါ့။
ပထမဆုံး ခြိနျးတှတေဲ့ ၁ခေါကျ ၂ခေါကျ လောကျမှာ သူအထငျကွီးအောငျ လို့ သငျ့အိမျက ဘယျလောကျခမျြးသာတာ၊ သငျက ဘာအကောငျကွီး၊ သငျအလုပျက ဝငျငှသေိပျကောငျးတာကို ပွောရငျ သူခကျြခငျြး ကွှပွေီး သူ့မှာ သငျ့ထကျကောငျးတဲ့ ယောကျြား မရှိဟုထငျသှားပွီး သငျ့ နားကခှာတော့မှမဟုတျတော့ဘူး . . . ဟိတျ ထ ထ ထ . အိပျမကျ မကျမနနေဲ့။ ဒီလို ကွှားလုံးထုတျပွီး ကိုယျ့ဘကျပါလာတဲ့မိနျးမက ငှမေကျတဲ့မိနျးမပဲ ရမယျ။ တကယျကောငျး တဲ့ ခတျေပညာတကျ မိနျးခလေးတှကေ တော့ သငျ့ကိုစိတျထဲက လှောငျနပေါလိမျ့မယျ။ တကယျကိုခြောတဲ့ လှတဲ့ ကောငျမလေးတှဆေို အဲ့ဒီလုို ငကွှားမြိုးတှေ သငျ့ထကျခမျြးသာတဲ့ ငကွှားတှေ က အပြိုမဖွဈခငျ ခတဲ လာကွောငျနတော လကျ မပွောနဲ့ ခွခြေိုးရညျတာတောငျ မလောကျဘူး။
အမှနျက သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ အမြားအကြိုး ကိုဘယျလုိုဆောငျရှကျမှာတှေ မိဘကြေးဇူးဘယျလို ဆပျမှာတှေ ကိုပွောပါ။ ဘဝရဲ့ ပနျးတိုငျတှေ ဘယျလို ဆှတျခူးမလဲဆိုတာ ဘယျလို ကွိုးစားနသေလဲဆိုတာ ကိုပွောပါ။ ငှနေဲ့ပကျသကျတာမှနျသမြှကို လုံးဝရှောငျပါ . ကွှားတယျ လလေုံးကွီးတယျ ထငျလောကျသောစကားမြားကိုလညျးရှောငျပါ။ ကိုယျ့လနေဲ့ကိုယျ မလှငျ့သှားပါစနေဲ့။
Previous: မ်ိန်းမ ပိုးနည်း ၁ဝ နည်း
Next: သာယာပျော်ရွှင်သောလူများ၏ လျှို့ဝှက်ချက် ၇ ခု